5 taona aty aoriana : Averina indray ny Star Tour any Toamasina -
AccueilVaovao Samihafa5 taona aty aoriana : Averina indray ny Star Tour any Toamasina
5 taona aty aoriana : Averina indray ny Star Tour any Toamasina
13/07/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Taorian’ny tany Antsirabe sy Mahajanga, rehefa nangingina nandritra ny 5 taona dia raikitra indray ary averina ny hetsika « Star tour » any Toamasina. Ao anatin’ny hetsika hiatrehina sahady ny fialan-tsasatra, na dia mbola tsy fantatra aza izay hiafaran’ny taom-pianarana, io hetsika io. Hotanterahina eo amin’ny tora-pasika manoloana ny Auximad any an-drenivohitr’i Betsimisaraka ny hetsika ny 28 sy ny 29 jolay izao. « Noho ny zava-nisy tany an-toerana no antony tsy nanatanterahana ny Star tour tao anatin’ny 5 taona. Azo lazaina fa efa milamina izany amin’izao fotoana ka raikitra indray ny hetsika », araka ny fanazavan-dRaherimanjato John, avy amin’ny Star mpikarakara io hetsika io. Ny 27 jolay dia efa hisy ny hetsika fanentanana amin’ny alalan’ny mozika. « Toa ny tany amin’ny faritra hafa dia hisy ny toerana manokana ahafahana manaraka ny hetsika amin’ny toerana misy seza sy latabatra », araka ny fanamarihan’ny mpikarakara ihany.
Mandritra ireo andro roa ireo, dia hisy hatrany ny hetsika sy fanentanana samihafa izay hiarahan’i Honorat ao amin’ny tarika fou Hehy sy Andry Barhone. Anisan’ireo tafiditra ao anatin’ny hetsika ny fifaninanana « cover » thb, ny fifaninanana Karaoké, ny fifidianana tovovavy sy tovolaky tsara bika aman’endrika na « Miss & Mister Queen », ny dihy mirindra ara-panatanjahantena na «Zumba xxl », ary ny lalao samihafa eny amoron’ny tora-pasik’i Toamasina.
Manana anjara toerana lehibe amin’ny « Star tour » ireo fampisehoana hiarahana amin’ny mpanakanto samihafa. Tarika sy mpanakanto efatra no hifandimby hanafana ny sehatra mandritra ny roa andro, ka ny tarika mpiangaly r’n’b avy ao Toamasina Welvi Waves no hisantatra izany ary ho tohizin’i Shyn ny sabotsy 28 jolay. Aorian’io dia hisy ny fanafanana entin’ny Dj amin’ireo hira mampihetsiketsika izay tsy hifarana raha tsy amin’ny 3 ora maraina. Ny alahady kosa dia anjaran’i Joudas sy Big Mj no hanafana ny sehatra miaraka amin’ireo hira nahafantarana azy avy. « Niainga avy amin’ny fanontaniana napetraka tamin’ny mponina no nifidianana ireo mpanakanto ireo », hoy hatrany ny Star.
Miasa-miasa amin’ny Star amin’ny fanatanterahana io « Star tour » any Toamasina io ny fimailo « Yes », ny mpitandro filaminana sivily sy miaramila ary ny vokovoko mena amin’ny fitandroana ny filaminana.